Dawlada Somaliya Oo Shaacisay 11 Shirkadood Oo ku Guulaystay Qaadista Xujayda Sanadkan. - Awdal Media
Dawlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka hadashay arimo la xidhiidha xajka sanadkan.
Wasaarada awqaafta iyo arimaha diinta ee soomaaliya ayaa kulan la qaadatay shirkadaha sanadkan ku guulaystay inay qaadaan dadka soomaalida ah ee soo gudanaya waajibaadka xajka.
Kulankan oo ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiinta wasaaradaha awqaafta iyo arimaha diinta ee maamul goboleedyada soomaaliya isla markaana uu gudoominayey wasiir ku xigeenka wasaarada diinta iyo awqaafta ee dawlada federaalka ah ayaa lagaga hadlay sidii ay xujayda soomaalida ahi u heli lahaayeen adeeg wanaagsan.
Wasiir ku xigeenka wasaarada awqaafta iyo arimaha diinta Cismaan Aadan Dhuubow oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in sanadkan ay daabulida xujaajta ku tartameen shirkado gaadhaya 58 balse ay ku guulaysteen 11 shirkadood, kuwaas oo wasaarada la shaqayn doona.
Wasaaradda ayaa diyaar garowgii ugu dambeyey ugu jirta u adeegidda 11500 oo Xaaji kuwaas oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka waxayna balan qaaday in ay kormeeri doonta lana xisaabtami doonta Shirkadaha u adeega Xujeyda Soomaliyeed sida uu sheegay wasiir ku xigeenka wasaarada diinta iyo arimaha awqaafta ee dawlada soomaaliya.
Sool;-Dacwad Laga Gudbiyay Wasiirka Hawlaha Guud Ee Somaliland.